JAANTAA ROGAN! Baarlamanka DF Somalia waa hay’adda qura ee aan lahayn anshax howleed & hab-raac muuqda!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada JAANTAA ROGAN! Baarlamanka DF Somalia waa hay’adda qura ee aan lahayn anshax...
JAANTAA ROGAN! Baarlamanka DF Somalia waa hay’adda qura ee aan lahayn anshax howleed & hab-raac muuqda!!
(Hadalsame) 15 Agoosto 2019 – Baarlamanka Dhexe ee DF Somalia waa hay’adda 1-aad ee laga doonayo metelaadda shacabka, taasoo ka dhigan danaha iyo hamiyada shacabka.
Nasiib xumo sidaa maaha, dan shacab oo ay ka fikiraan ka joogtee waxay lumiyaan ama jahawareeriyaan shacabka.
Dabcan waa jiraan in yar oo xildhibaannada ka mid ah oo mas’uuliyad iyo waddaniyad muujiya waana ku amaanan yihiin waloow ay waajibkoodii iyo waxa xildhibaan loo noqdaaba ay intaa tahay sharciyan, balse waxaa kuwaa laftooda kabaha ka gooynaya oo sumcad dilaya qaar kale oo geed kasta u fuula danohooda shakhsiga ah.
Waxaa si wanaagsan loola socdaa inta xukuumadood oo la ridey iyadoo dan shakhsi ah, sharuur iyo laaluush la xasilinayo. Qiyaas dib u dhaca ay dal aan wax u dhisani jirin oo Somalia oo kale ah u gaysanayso riditaanka xukuumadda, iyadoo mid kasta riditaankeeda lagu khasaariyo lacag badan oo wax kale lagu qaban lahaa.
Midda iminka joogtaana, dar Alle iyo rabitaan xildhibaan kuma taagnee farsamooyin iyo laaluush ayay uga aamusan yihiin. Qiyaas xildhibaan u taagan in uu laaluush qaato ama wax kharribo, ee misna ku doodaya inuu shacab metelo.
Beri dhowayd markii ay Kenya cayrisay Danjirihii dalka, waxaa Nairobi isku maqiiqay qaar badan oo ka tirsan Baarlamanka, kuwaasoo xilli xun halkaa uga soo tannaagoonayay DF Somalia oo ah metelaha dalka.
Dabcan DF Somalia waa la dhaliili karaa, waana leedahay khaladaad kumannaan ah, balse Baarlamanku wuxuu leeyahay xarun uu kula xisaabtamo DF Somalia oo aan ku oollin Nairobi.
La idiin sheegi maayo sida ay u wajaheen wax lagu sheegay khilaafka DF Somalia iyo Maamullada, kuwaasoo ay misna la kala safteen, iyadoo uusan jirin qoraal kasoo baxay Baarlamanka oo si xirfad iyo mas’uuliyadi ku jirto uga hadlay arrintaas.
Taa iskaba daaye, Baarlamankii ayaa yiri ”Xiriirkii baannu isu jarnay” annagoo kala ah midka Hoose iyo kan Sare. Ka daroo dibil dhal.
Shalay waxaa soo baxay warar sheegaya in ay Kismaayo tageen ”wefdi ka socda Labada Aqal”, dadka qaar baa si wanaagsan u fikirayay oo is lahaa wax bay isu jiid jiidi doonaan, dee magaca eeg, waa wefdi ka socda labadii aqal ee dalka wax laga waydiin lahaa.
Nasiib xumo, waxaa meeshii kasoo muuqday rag khilaaf ay xalliyaan daaye iyagu khilaaf socda ah, waxayna dad badani is waydiiyeen sababta ay u sheeganayaan magaca Labada Aqal, maadaama aysan nidaam ahaan meesha u joogin howl rasmi ah oo ay ugu maqan yihiin Labada Hay’adood ee ay ka tirsan yihiin?
La soco qaar badan oo raggaa ka tirsani meel kuma oga, waxbana uma qabtaan meelihii laga soo doortay, haddiiba la doortay, ama aan warka toosinnoo niraahno laaluushka looga soo xulay.
Gunaanadkii, haddii ay dhab tahay in lasoo celinayo dowladnimada sida fudud iyo fikir la’aanta lagu burburiyay, waa in ay hay’aadka DF Somalia yeeshaan hab-raac iyo anshax howleed, waa in la helaa xisaabtan ku aaddan sida loo bixiyo hantida qaranka. Baarlaman noqon maayo, meel aan nidaam lahayn oo uu qofku iskii iskaga socdo, xeer uu ilaaliyaana aanu jirin.
Ugu dambayn, waa in la dhisaa Makxamaddii Dastuuriga ahayd, oo weliba ah mid lagu maamulayo daacadnimo iyo xirfad, si xal sharci ah loogu helo isbarbar-yaaca jira.
Previous articleAADAN M CALI: Fuundigii la xag-jireeyay ee dilaaga halista ah noqday!!
Next articleMW Jubbaland oo Beesha Caalamka siiyay jawaab jikaaran